Bale, Kane, Vidal, Terry, Batshuayi, Pjanic, Mayer & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Bale, Kane, Vidal, Terry, Batshuayi, Pjanic, Mayer & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Bale, Kane, Vidal, Terry, Batshuayi, Pjanic, Mayer & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Wakiilka Xiddiga Real Madrid ee Gareth Bale ayaa sheegay in uu xiddiga reer Wales jecelyahay Madrid oo uuna doonayn in uu ka tago xilli ay jiraan warar sheegaya in ay Man United isku dayi doonto in ay la saxiixato xgaaga (Manchester Evening News).
Daafaca kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini ayaa sheegay in uu Harry Kane oo 24 jir ah uu la qaab ciyaareed yahay xiddigaha Lionel Messi iyo Cristinao Ronaldo ka hor kulankooda caawa ee champions League (Sun).
Tababaraha Kooxda Man United Jose Mourinho ayaa qorshaynaya in uu isku shaandhayn ku sameeyo daafaciisa kooxda xagaaga isaga oo iibin doona xiddigaha Chris Smalling oo 28 jir ah iyo Phil Jones oo 25 jir ah (Mirror).
Arsenal iyo Liverpool ayaa xiiseynaya saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Schalke Max Mayer, oo 22 jir ah xagaagii. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Germany, oo qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, ayay sidoo kale doonayaan Bayern Munich iyo AC Milan (Star).
Radajii ay Man United ka qabtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee reer chile iyo kooxda Bayern Munich ee Arturo Vidal ayaa god ku dhacday kadib markii uu xiddiga reer 30 jirka ah mustaqbalkiisa u hibeeyay Bayern Munich (Mirror).
Tababaraha Kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaki kale sii galiyay mustaqbalka goolhayihiinsa Simon Mignolet kadib markii uu sheegay in aan 29 jirka reer Belguim loo dooran doonin Goolhayaha champions league kulanka Porto (Guardian).
Kooxda Borussia Dortmund ayaa isku dayi doonta in ay si toos ah ula wareegto weeraryahanka reer Belguim ee amaahda uga maqan chelsea ee Michy Batshuayi oo 24 jir ah inkasta oo uuna heshiiska amaahda ku jirin heshiis toos loo iibsan doono (Evening Standard).
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus iyo Bosnia Miralem Pjanic, oo 27 sanno jir ah, ayaa shaaca ka qaaday inuu iska diiday fursad uu ugu biiri lahaa Arsenal iyo Tottenham (Telegraph).
Kooxaha Paris St-Germain iyo Chelsea ayaa xiriir la sameeyay tababarihii hore ee kooxda Barcelona ee Luis Enrique iyaga oo kala hadlay in uu noqdo tababarohooda cusub (Sky Sports).